kuvhuraSUSE 13.2 inowanikwa + post-yekuisa giraidhi | Kubva kuLinux
Nguva pfupi apfuura timu yakavhurikaSUSE yakaburitsa yazvino vhezheni yakagadzika ye vhuraSUSE 13.2.
1 OpenSUSE 13.2 Zvimiro:
2 Ndinoitora kupi?
3 Chii chaunofanira kuita mushure mekuisa?
OpenSUSE 13.2 Zvimiro:
kuvhuraSUSE 13.2 iri ...
Kuedza kwakawanda kwakaiswa mukuyedza mune ino positi, pamwe nekuvandudza kune yedu yakavhurikaQA otomatiki yekuyedza chishandiso, chishandiso chinoona kuti mugumo mhedzisiro yacho isina kushamisika kusingaite.
Iyo Btrfs faira system ndiyo yakasarudzika faira sisitimu yekuparadzanisa midzi, uye XFS yeiyo / yekuparadzanisa imba. Iyo Linux 3.16 kernel inounzawo kuvandudzwa mukugadzikana uye kuzivikanwa kweakasiyana Hardware. Uyezve, iyo kodhi yekodhi yeYaST yakura mushure mekuendeswa kuna Ruby, mutauro unobvumidza kuvandudzwa kwezvinhu zvitsva nemidziyo.
Kuburitswa uku kunouya neAppArmor 2.9 inogoneswa nekutadza iyo inoshandura mukuwedzera chengetedzo uye yakasimba nhoroondo muAppArmor. Kune mamwe zvakare akawanda akagadziridzwa mapakeji emamwe akawanda enetiweki maturusi seSamba, AutoYaST, nevamwe vazhinji.
kuvhuraSUSE 13.2 kunouya neGCC 4.8 uye sarudzo yekuisa iyo nyowani GCC 4.9, Qt 5.3 inounza kuwanda kwakawanda kune QT interface. Iwe zvakare une sarudzo yekuisa iyo nyowani KDE5 (iyo ichiri pasi pekuvandudzwa).
Mukuburitswa uku YaST nyowani "yakashandurwa" mumutauro weRuby yakura kusvika padanho rekuti codebase yayo yave kuchengetedzeka uye izere nezvinhu zvitsva zvitsva kupfuura zvawaitarisira kubva kuYast. ActiveDoc inoenderera mberi iri nzvimbo yekuwana zvinyorwa zvezvishandiso zvakasiyana siyana zvauchazowana munguva pfupi yapfuura kana munyika yeLinux. Vhezheni 13.2 zvakare inopa KDE 4.14 inozove iyo desktop nharaunda nepo iyo KDE chirongwa ichienderera ichivandudza izvo zvichave Plasma 5. Paunenge uri muGNOME unogona kunakidzwa neshanduro yayo 3.14. LXDE yakagadziridzwa kuitira kuburitswa neakagadziridzwa mapakeji, ekuona ekuwedzera, uye matani ezvigadziriso.
Linux 3.16 inouya nezvikwidziridzo zveiyo nyowani, iyo yakavhurika sosi mutyairi wemakadhi eNVIDIA uyezve akawanda maficha emifananidzo kubva kuIntel uye AMD. Iyi kernel nyowani inovandudza mashandiro eBtrfs uye XFS.
KDE ikozvino inouya nerutsigiro rwekubatanidza nharembozha dzako kuburikidza nekdeconnect package. Iyo nyowani Btrfs faira sisitimu iyo inoiswa nekumisikidza kune iyo midzi yekuparadzanisa, zvinoreva kuti pachave nezvakawanda zvakawanda zvitsva maficha zviripo, kupfuura zvawaimbofungidzira. YaST zvakare inouya neiyo nyowani Qt interface iyo yakagadziridzwa zvakare kuQt5.
Kuburitswa kutsva uku kune huwandu hwakanaka hwetekinoroji nyowani dzekuyedza dzinowanikwa iwe dzaunogona kuyedza, senge Wayland 1.4, KDE Frameworks 5, software ichangoburwa inowanikwa kubva kuBuild Service uye neruvara rutsva rwemusoro wekuparadzira.
Mimwe mifananidzo yangu yakavhurikaSUSE neGnome:
Chii chaunofanira kuita mushure mekuisa?
Kana iyo system yaiswa, isu tinoenderera nekuvhura iyo terminal uye typing:
su (isu tinosuma superuser password) zypper kumusoro zypper kuisa-nyowani-inokurudzira
Packman repository (yakakurudzirwa):
zypper ar -f -n packman-zvakakosha http://packman.inode.at/suse/openSUSE_13.2/Essentials/ packman-zvinokosha zypper ar -f -n packman-multimedia http://packman.inode.at/suse /openSUSE_13.2/Multimedia/ packman-multimedia
Isu tinogadziridza iyo system:
Isu tinoenderera mberi nekuisirwa kwakakosha zvirongwa:
zypper gadza vlc vlc-codecs fetchmsttfonts rar unrar htop nano mc filezilla MozillaThunderbird zypper up zypper kuisa-nyowani-inokurudzira
Isu tinoenderera mberi nekuiswa kwepashoma mapakeji kuumbiridza (sarudzo):
Uye voila… Une yako yakavhurikaSUSE 13.2 yakagadzirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » openSUSE 13.2 inowanikwa + post-yekuisa gwara !!!
Ndinokutendai zvikuru, asi mumwe munhu anoziva nezvekuwedzera kunovanza chiratidzo chechishandiso chatiri kumhanya, icho chinoonekwa mubhawa repamusoro, sezvo ini ndisingachide, ndinobva mukugara pekutanga os luna uye ini ndaifanira kuchinja mashandiro, nekuda kweshanduro yemakomputa uye iyo nyowani haindibvumidze kuti ndiise yekutanga os saka ndine ubuntu gnome 14.04.1
Zvinotaridza senge vari kutengesa yakavhurika Suse hahaha asi ini ndinobvuma iri rakanakisa distro
Ini handisi kuitengesa .. Ingori yakakura distro :).
Munguva pfupi yapfuura OpenSuse inotaridzika chaizvo, asi ini handikwanise kusiya Debian, kunyanya nekuti chero imwe distro ine systemd inosununguka zvisina kujairika panguva yekutanga (ini handizive kuti nei Debian isingaitike). Uye chokwadi ndechekuti Kuedzwa kweDebían kunondiitira zvishamiso. Ini zvakare ndinoshandisa FreeBSD uye Slackware, asi neyekupedzisira ini ndinopedza zuva rangu kudzoreredza zvinhu zvasara mushure mekuvandudzwa.
Ini ndaive mushandisi weDebian uye ini ndakaenda kune vamwe vazhinji kuyedza kusanganisira FreeBSD uye Slackware uye pakupedzisira pano ndiri muSUSE nyika. FreeBSD 10 yakanaka asi chete kumaseva .. Pane desktop haina kugadzikana.
Ini ndinoshandisa FreeBSD seimwe desktop, kwete zuva nezuva, uye ndiri kunyatsoita mushe. Ini ndinongopotsa GParted, ndinokwira zviri nyore zvikamu kana ma disks ekunze muExt4 uye kutsigira zvirinani kweWacom (iyo yandisingakwanise kuti stylus ishande kana kupfura). Zvimwe zvese zvakanaka. Dai ndanga ndisina izvo zvipingaidzo zvitatu, ndingadai ndichiri kusiya Linux kwemwaka.
Ndi OpenSuse ndakapedza chinguva, sekune vamwe vazhinji, kudzamara ndaguta nekutanga patsva kakawanda kuti ndiedze kusvika pachiratidziro chekupinda.
Ichi ndicho chikonzero ini ndinosheedza FreeBSD kusagadzikana pane desktop :). Uye kune zvimwe zvinhu… MukuvhuraSUSE hapana chinhu chinoshamisa chakaitika kwandiri kubvira 12.3. Ini handina kumbobvira ndaita dambudziko raunotaura rekutangazve kuti usvike kuchiratidziro.
Pane mumwe munhu ane chinhu chakafanana neni here?, Na 13.1 haidzime dambudziko ne kernel (3.11) + firmware ndinofungidzira, kana uchivandudza kusvika ku13.2 dambudziko rimwe chete (risingakwanise kugonesa acpi) uye iyo internet (network maneja) haina inobatanidza.
Mhoro Carlos, unogona kuedza kuisa mapakeji aya:
zypper mune kernel-firmware
zypper mune mapatani-akavhurikaSUSE-laptop
Kana pasina chakabatsira kuisa default kernel. Kuti uone iyo kernel yaunoshandisa mhanya uname -a. Kana iwe ukaona kuti zvinodaro muzita «desktop» isa izvi:
zypper mune kernel-default
Kana pasina chakabatsira iwe unogona kuyedza neiyo vanilla kernel (yakananga kubva kune kernel.org isina kuchinjwa nekuvhuraSUSE):
zypper mune tsanga-vanilla
Handizive kana iyi iri nyaya yako, asi mune yangu ndinofanira kuisa ndisina mutyairi we ACPI kana ini handiise uye kana ndamboisa ndinofanira kuenda kuBootloader Configuration muYaST2 ndochinja mureza kubva ACPI = off kuenda ku ACPI = Kuvhura, kana zvisiri, ini handidzime.
Kutenda petercheco yechinyorwa ichi, chinonyanya kubatsira. Ini ndichataura kwazviri pandinokwidziridzira kuOpenSuse 13.2.
SuSe yakandikunda kubva pa7.3. Izvozvi iri OS yangu yemazuva ese, inogutsikana kwazvo.
Ndatenda zvikuru uye ndinofara: D.
Chero ani anoziva nzira yekuisa Dropbox mu opensuse 13.2 uye ini ndine dambudziko nekuti ini ndakaisa virtualbox asi kana ini ndichimhanya hapana zvazvinoita
zypper mubhokisi rezasi nautilus-dropbox
Iyo inouya mune repos :).
Kana zviri zve VirtualBox unofanirwa kuisa iyi package:
zypper mu virtualbox-qt
Ipapo iwe unovhura Yast uye iwe enda kumushandisi maneja -> edit -> ruzivo uye kurudyi unowana mapoka. Pakati pavo pachave neanonzi vboxusers. Inofanira kuvhurwa. Dzorera uye enda.
Chinyorwa chakanakisa, ndinoda OpenSuse asi handichakwanisa kuzviparadzanisa nesinamoni zvakare, mumwe munhu angandiudza maitiro ekuchenesa kuisa neiyi desktop mune OSUSE 13.2? Ndotenda zvikuru.
Izvi ndizvo zvandakawana:
Ndatenda, ndave kutoongorora mutungamiriri. 😉
Ita zvishoma kuisa neX wobva washandisa iri gwaro
zypper ar http://download.opensuse.org/repositories/X11:/Cinnamon:/Factory/openSUSE_13.2 Cinnamon
zypper Ref Sinamoni
zypper mu -t muenzaniso Sinamoni
Kutenda neruzivo, ini ndichamirira mazuva mashoma uye kuyedza kuzviita. 😉
Ini ndaida kugadzira mubvunzo.
sezvo ini ndakawedzera iyo nvidia 750ti handikwanise kumhanya chero distro.
hapana anopedza kubhowa.
Avelino De Sousa akadaro
Mhoroi, muOpenSUSE 13.2 ndeiyo "inorambidzwa yekuwedzera" yakaiswawo seUbuntu?
Pindura kuna Avelino De Sousa
Iko hakuna "install ubuntu-restricted-extras" sekudaro, kana usiri iwe kumisikidza iyo Packman repository uye libdvdcss uye wozoisa inoenderana mapakeji, pachezvangu ne13.1 ini ndakatevera gwara iri
Pazasi pane chikamu chinotsanangura maitiro kuzviita.
Ngatitarisei kana pacman atoiwedzera pano mune yangu posvo :). Unofanira kuverenga ...
Ndine urombo, ini ndawana iyo kubva pa13.2:
Kwakanaka distro !!! Ndangoisa paPC yangu kekutanga !!! Inokurumidza uye yakasimba. Ndingadai ndakashaikwa kuti ndione mashandisiro andinoita maTTK madingindira uye ma icon theme kuti zviite sezviri nani. Kutenda kubva kuArgentina! Mario.
Isa iyi pasuru:
zypper mune gnome-tweak-chishandiso
Mhoro PeterCheco, ndine mubvunzo. Unogona kundiudza kwandinogona kurodha pasi Wallpaper iri raunoshandisa nemhando yakanaka? Ndinoifarira zvakanyanya (ikozvino handishandisi kuvhuraSUSE asi LMDE). Ndatenda uye ndinokukwazisai kubva kuKošice. 😉
Waita hako shamwari… Amai vangu uye urikuitei muSlovakia?
Mhoroi, ndatenda iyo Wallpaper! 🙂
Ndinoita zvese zvandinogona pano. Ini ndinorarama, ndinodzidza uye ndinoshanda zvakare. 😀
Madreeee… :). Asi iwe uri Mepanishi here kana chiSlovak wakadzidza Spanish kubva kuna fucking amai? Kana zviri izvo kuti maCzechs neSlovaks ndiwo anonyungudika: D. Uye maC zvakare ...
Ndinobva kuVenezuela. Ale viem aj slovenský psať, hovoriť. 😛
Ndapota! unogona kundiudza maitiro ekugadzira bootable us ne openuse 13.2 kubva kuUbuntu? Ndakaedza ne multisystem uye haina kuzvigamuchira… ndakaedza ne Unetbootin uye kana ………. ndaigona sei?
Kwazisai uye kuvonga
ps: Ndatarisa peji rekuvhura kuti ungagadzira sei bootable usb uye haina kundishandira ...
Tarisa, edza iyo "dd" yekuraira ...
Delete zvese zvikamu izvo usb yako ine GParted kana neiyo software iwe yaunoda ... (backup data pamberi, hongu)
# dd kana = »nzira / kuenda / opensuse.iso» ye = / dev / sdX
Sezvauchacherekedza, inofanirwa kumhanya semudzi, zvakare nzira yeziso rako inofanirwa kuenda isina mabhureki kunze kwekunge iine nzvimbo (unogona kushandisa backslashes munzvimbo), uye munzira inoenda kune usb yako, chinja X yezvazviri iyo system Ini ndakakupa iwe usb yako (unogona kuitarisa ne Sudo fdisk -l), chenjera, haufanire kudoma chero chikamu, kureva kuti, unongosiya sdX, kwete sdX1 kana sdX2 ... etc.
Unomirira kuti ipedze (kunonoka kuchaenzana nehukuru hweiyo ISO uye nekumhanyisa kumhanya kweUSB yako ...)
Iwe unofanirwa kukwanisa kubhururuka kubva ipapo ...
Mhoro, isa Munyori Wemifananidzo. Iyo ndiyo nzira yakanakisa yekugadzira iyo Bootable USB. sudo apt-tora kuisa usb-mufananidzo munyori.
dd if = la_iso_opensuse.iso ye = / dev / sdb (kana imwe tsamba inoenderana neyako usb).
Ini handizive kuti nei ndisingakwanise kutora yangu Epson Stylus Photo R265 printa kuti ishande neiyi distro, kunyangwe kurodha pasi vatyairi kubva kuEpson peji rekurodha uye kuribatanidza panguva yekuisirwa. Mune maonero angu iyi mhando yeprinta haishande neiyi sisitimu inoshanda.
Manheru akanaka, kana uchiverenga ichi chinyorwa ndinoona kuti iwe unoshandisa openuse gnome uye ndinoda kuziva kuti zvinofamba sei nerutsigiro rwemultimedia nekuti kunyangwe paine ndakaisa packman repos uye akawanda macodec, iyo totem uye rhythmbox zvinoramba zvichindipa matambudziko ekutamba mamwe ma multimedia mafaera uye ini ndinosarudza kushandisa aya pamusoro pedzimwe sarudzo senge gnome-mplayer semuenzaniso, kunyangwe kana usingakwanise, tichaitei?
Mhoroi masikati akanaka,
pinda uyu murairo uye gadza macodecs:
zypper gadza libxine2-codecs k3b-codecs ffmpeg akaremara gstreamer-plugins-yakaipa gstreamer-plugins-yakashata gstreamer-plugins-yakaipa-yakabva-addon gstreamer-plugins-libav libdvdcss2
Chii chandinorasikirwa nacho kana ndikasaisa iyo Packman Repositories?
Mushure mezvose izvi, mazana maviri ekutanga akakurudzirwa mapakeji, uye mazana matatu mapakeji ekuisazve uye pakupedzisira zvinozoitika kuti totem haigone kutamba .mkv .mp200 .wmv .300gp nezvimwewo uye isa vlc! Aiwa ndatenda! Kune mumwe mutambi kana system yatove Poshi
Mhinduro yangu yapfuura inogadzirisa kusahadzika kwako.
Chikwata cheOpenSuse chingambogadzirisa Firefox neThunderbird's 25 yechipiri yakavhurika kunonoka?
Geraldo rivera akadaro
Tsvaga google yeiyo LibreOfficeTurno.sh faira uye riite, ichabvisa iro dambudziko nguva yekumhanya, libreoffice, firefox, thunderbird, nezvimwe.
Pindura Geraldo Rivera
Ini ndinofungidzira iwe uchireva izvi:
Izvo hazvishande kwandiri muOpenSuse, mune zvimwe zvese kugovera zvazvinoita. Icho chinetso chandisina kuwana mhinduro kune akati wandei vhezheni yeOpenSuse uye zvinonditsamwisa nekuti zvinongova nemashandisirwo matatu andinoshandisa zvakanyanya (firefox, thunderbird uye libreoffice).
Zvisinei, ndatenda nerubatsiro.
Izvi zvinogadzirisa dambudziko rako:
Vhura Yast uye enda kunetiweki kubatana. Mukati famba tebhu kuDNS uye zita rehurongwa. Ikoko iwe unowana iyo PC zita zita chikamu uye iwe unofanirwa kudzvanya pasi pezita remubati rakanzi Set hostname kune ip (loopback).
Sevha uende :).
Ini ndanga ndichiedza kudzima IPV6 mune zvese Firefox neYast pandakaona meseji yako ndikaona mwenje 🙂
Ndatenda zvikuru, murume.
Akanakisa gwara, iwe sekugara uchipa kugoverwa kwakanaka uku. Ini pachangu, ini ndoda kubvisa (uye kuisa muTABU) iyo package "PackageKit" kubva panguva yekumisikidzwa, nekuti inogara ichindinetsa.
Mune maonero ako pachako, kuisa zvinhu, zypper yakwana uye pane zvakawanda zvacho (uye Yast2 kana iwe uchida kushandisa graphical interface). Chinhu chakanaka nezve software yemahara ndechekuti yakasununguka kusarudza, saka munhu wese anosarudza zvavanoda zvakanyanya. ^ _ ^
Ndatenda kwazvo shamwari… :). Ichokwadi zvaunotaura. Apper inogona kunge iri panze. Ini ndinogara ndichishandisa zypper uye yast senge iwe.
Petercheco, unoziva kana 13.2 iri zvakare LTS? kana iyo chete 13.1 yandinoshandisa izvozvi pakomboni .. !!!
Kunyangwe ini ndine Mint kde pane yangu laptop, ndanga ndichishandisa iyo desktop zvakanyanya ne openuse 13.1 uye ini ndaverenga zvimwe zvishamiso zve13.2 asi ini handina kukurudzirwa kuti ndiitore. !! Sezvo ini ndichida kuchinja iyo Mint yelaptop kune imwe imwe
Pindura kune nosferatuxx
Chete 13.1 :). Ehezve .. Shanduro dzese dzakavhurikaSUSE dzine rutsigiro rwezvinhu zviviri zvinotevera kuburitswa pamwe nemwedzi miviri yaunowana nemwedzi makumi maviri.
Hei, chimwe chinhu chinoshamisa chakaitika kwandiri. Ini ndaive ndaisa ese multimedia codecs, ndaigona kutarisa ese mavhidhiyo kuburikidza nevlc. Kubva mp4, kuenda kuVob. Nekudaro, nezuro waNovember 18, Chipiri, ndakashandisa rairo, semudzi: "Zypper dup" uye zvese zvakakwenya kumusoro. …. Iyo inoshanda zvese kubva mp3, clementine, yakanaka. Zvisinei, ese ari maviri akavhurikaSUSE vhidhiyo software, senge VLC. Ini ndinowana inotevera kukanganisa:
«Pasina yakakodzera modikodhi module:
VLC haitsigire iyo "h264" vhidhiyo kana odhiyo fomati. Nehurombo hapana nzira yekuzvigadzirisa.
Pasina yakakodzera modhodhi module:
VLC haitsigire "mp4a" odhiyo kana vhidhiyo fomati. Nehurombo hapana nzira yekuzvigadzirisa. "
Usatenderedze, chaizvo…. uu
jojojo, ndakaita zvese zvakare, ndinoreva, ndakadzokera kunoita zvandaimboita, ndisati ndatarisa blog iri ndikaita zvawakaisa zvikandishandira, ndakazviita futi ndizvozvo. ; -; : 'v chii chinotyisa isu.
Ndine hurombo kwehupenyu hwangu hwese hwandakaedza kutanga kuvhura bhuroti kubva kuUSb ini handina kumbobvira ndakwanisa, iyo linuxlive usb inogadzira windows uye iyo unetbootin ye linux haindishandire sezviri pachena chete ne openuse iso, chero tsananguro kana rubatsiro ndapota? Kutenda mberi..
Mhoro, shandisa rufus, haina kunditendera ini uye neizvozvo zvese zvakashanda.
Rufus inoshanda, asi iine usb hongu uye neimwe yakasiyana haina kutakura kernel panguva yekutanga-kumisikidzwa. dzimwe nguva zvinoenderana nependrive.
Pindura kune anonimmousse
Isa Opensuse13.2 Ndine matambudziko nekuyedza kuvhura pdf ine okular uye okular inovhara unogona kundiudza nei?
Pindura kuna Jonatan
Tinokurudzira kuti iwe ubvunze uyu mubvunzo mumubvunzo wedu uye basa rekupindura rakadaidzwa Bvunza KubvaLinux kuitira kuti nharaunda yese ikwanise kukubatsira padambudziko rako.
Yakagadziridzwa OpenSUSE 13.2
Ini ndichangopedza kugadzirisa iyo OS. Pakutanga ndinofunga zvakanaka, senguva dzose. Bhutsu yakati rebei pane OpenSUSE 13.1.
Ndatenda nemutungamiri. Icho chirevo chakanaka.
Mushure mekuisa opensuse 13.2 inogara ichindibvunza yekuisa usb yekumisikidza chero chirongwa kana kuita chero shanduko kubva yast zvinondiudza kuti haugone kuwana iyo yekumisikidza svikiro uye nzira yeUSB, ini ndinoiisa uye ndoita shanduko, ndingaite sei kugadzirisa izvi izvo zvandiri kugara ndichikumbira kuisirwa usb
Mhoro! Tarisa mune runyorwa rwezvinyorwa kana iwe wakamisa imwe iyo inoreva kune yekumisikidza svikiro, mune yako iyo USB, uye kuimisa. Kazhinji ndiyo yekutanga.
Chokwadi. MuYast iwe unoenda kunzvimbo dzinochengeterwa uye ipapo unodzima repo inoreva yako USB kana DVD :).
chii chinonzi zita reposvo ??? dzima imwe uye chinhu chimwe chete chinoramba chichiitika.
Iyo dvd repository inonzi yakavhurikaSUSE-13.2-0
Pablo perez akadaro
Mhoroi, ini ndangoisa suse 13.2, zvese zvakanaka, hazvizive usb yangu ports uye handigone kudzvanya tsvimbo yekubatanidza wifi, unogona kundibatsira?
Pindura Pablo Pérez
Isa iyo Kernel Desktop kana iwe uine 64 bit kana 32 bit processor nePAE:
Kuti uone kana processor yako ichitsigira PAE kumhanya:
kati / proc / cpuinfo
Imwe nzira ndeyekugadzirisa yast2-> Sisitimu -> / etc / sysconfig uye wedzera xhci_hcd mu INITRD_MODULES uye MODULES_LOADED_ON_BOOT
Mhoro Peter, ini ndatoisa iyo Kernel Desktop, ndikadzoreredza komputa uye hapana, handizive kana ndichifanira kuita chero chimwe chinhu. Kune rimwe divi, ini ndaida kushandisa imwe nzira uye ini handizive kuzviita sei.
Ndatenda nerubatsiro rwenyu.
Zvakanaka, izvi zvinoshamisa ... Izvi hazvina kumboitika kwandiri. Tarisa muBIOS kana UEFI kuti iwe une madoko eUSB akagoneswa kubvira kana zvichishanda pasina matambudziko.
Imwe nzira yandakakupa yaishandisa iyo Yast application uye iwe unoenda kune iyo Sosi chikamu uye / etc / sysconfig. Zvese graphical, asi kana iwe waisa iyo Kernel Desktop izvi hazvidiwe kwauri.
Hi Peter, dambudziko rakagadziriswa. Kutenda kuraira kwako, ini ndakapinda muBIOS uye zvirokwazvo ndakanga ndisina madoko e USB akagoneswa, ndakavabvumira uye otomatiki zvese zvakabatwa zvakazviziva uye zvinoshanda zvakakwana.
Ndatenda zvikuru nemupiro uye kuzvipira kwako.
Kumbundira kubva kuCanary Islands. (Speini)
Unogamuchirwa shamwari, ndizvo zvatiri pano :).
Kwazisai nhasi kubva kuPrague asi mangwana kubva kuMadrid (Spain).
Ndatenda ndiri kuyedza 13.2 ine intel mbiri musimboti, 4gb ram, rtl8187 uye panguva ino yandinoda, ndatoedza Ubuntu, Fedora, Mint ... uye inguva yekutanga pandinoisa Open Suse panguva ino zvese zvakanaka, ingori diki diki neiyo manejimendi manejimendi yaifanira kuisa iw, sezvo ini ndakanga ndisina internet yekubatanidza nekuti ini ndaisakwanisa kubatana neWi-Fi, ndakaiisa kubva kune yekuisa pendrive kuburikidza neYast uye dambudziko rakagadziriswa, ndatenda nemupiro .
Jose A. Lopez akadaro
Ndinovimba aya ndiwo makodhi anodikanwa eKDE desktop.
Pindura kuna Jose A. Lopez
Izvo ndezve nharaunda dzese ...
Cristian Rengifo akadaro
Mhoro, uye izvo zvinodikanwa kuti uzviite nekodhi? Ini ndichangoisa OpenSuse 13.2 uye inoita kunge graphic mode yekuisa zvigadziriso, handina kudzvanya gadza uchimirira mhinduro yako, kana ndichizviita mu graphic mode kana koni, ndinoramba ndakatarisira.
Pindura Cristian Rengifo
Unogona kuzviita zvese kuburikidza neconsole uye neYast, asi iyo koni inotora nguva shoma: D.
Mudzidzisi akanaka kwazvo !! Ndatenda kwazvo zvakabatsira kwazvo !!
Pindura kune Anopinda_zim
Unogamuchirwa :). Ndafara.
gonzalezmd (# Bik'it Bolom #) akadaro
Zvakanaka, ndatenda nemutungamiri. Mufaro
Pindura gonzalezmd (# Bik'it Bolom #)
Unotambirwa .. ndafara 🙂
810 MAPAKESI KUSIMBISA MUCHISHANDISWA CHESHURE !!!!
ZVINOONEKWA URI ...
Pindura kuna sinnerman
masikati akanaka iyi vhezheni inogona kuiswa online, senge vhezheni 11.0
32 zvishoma: http://download.opensuse.org/distribution/13.2/iso/openSUSE-13.2-NET-i586.iso
64 zvishoma: http://download.opensuse.org/distribution/13.2/iso/openSUSE-13.2-NET-x86_64.iso
JUAN CARLOS FERRER akadaro
Mhoroi, ini ndine mubvunzo, zvinoitika kuti ndine openuse 13.2 yakaiswa pakombuta yangu asi ini ndoda kuronga basa ne crontab, kuti idzime zvoga, ini ndatozviita ne ubuntu nedzimwe shanduro dze openuse asi mu iyi vhezheni, haidi kundimhanyisa maitiro anotevera:
Sezvauri kuona, ndakaigadzira kuti idzime mazuva ese na8: 20 PM, asi haina kuita mutongo.
Pindura kuna JUAN CARLOS FERRER
20 20 * * * kudzima -h izvozvi
20 20 * * * simba
Ndiri kuda kuisa openuse neWindows 8 ... asi ini ndinoedza kuiisa kubva kune usb uye, chokwadi, handina zano rekuita. Panouya poindi painondibvunza kuti ndisarudze dhisiki iro, sezvandinoverenga, rinofanira kunge riine iso mufananidzo weiyo system yekuisa, asi ini ndinosarudza iyo "bootable" usb, uye ichiri kundibvunza nzvimbo chaiyo, senzira, uye Ini handizive chekuisa: S
Ini ndinokwidza iyo USB neiyo "rufus" chirongwa neiyo uefi sarudzo. Just in case chingosiya diski kwawanga uchizoisa kwakabatana. Ndakanga ndisina matambudziko. Ndakaedza kare nemamwe mapurogiramu uye hapana yakandishandira.
Gadzirira usb mhenyu:
Kuisa dzidziso (13.2 kana Tumbleweed inoisa zvakafanana):
Mhoroi vanhu vese !!! Ini ndiri mutsva mu linux uye ini ndine dambudziko nezwi. Ndine usb kadhi rezwi sezvo kadhi rezwi randaive naro mukombuta yangu rakatsva !!! Dambudziko ndere PULSE nekuti neALSA ruzha runoshanda mushe nezvose asi maikorofoni kubatana kunongoshanda nealsa uye ne pulse hakushandi !!! Ini ndanga ndichishandisa WIFISLAX uye ruzha uye maikorofoni zvinoshanda zvakakwana kwandiri uye zvinounza Alsa semutyairi weRuzha, asi nekumwe kugovera kune Pulse, maikorofoni haishande kwandiri !!! KANA MUMWE MUNHU AKANGOGA NDINOGONA KUTI NDITSURE KUTI KUTI NDITSURE PULSE UYE ALSA NDINOGONA KUTENDA. KANA KANA UCHIZIVA ZVECHIMWE CHIMHURE, NDINOVIMBA KUTI UNOGONA KundIBATSIRA, KUKWazisaI KWAVOSE !!!
Facebook pane TOR. Iko kune tsananguro.